Ulinde incazelo umndeni wofele emsebenzini | IOL Isolezwe
Ulinde incazelo umndeni wofele emsebenzini
Isolezwe / 19 June 2012, 1:09pm /
MINENHLE NTOMBELA noMLUNGISI GUMEDE
ULINDELE izimpendulo ngokufa kwendodana yawo umndeni womfana olinyazwe wumshini wafa eRainbow Chicken Farm eMpumalanga eHammerdale ngeledlule. UNtokozo Mntungwa (21) ongcwatshwe ngeSonto ubulawe wumshini ogaya izinkukhu kule femu.
UMnuz Mlungisi Mntungwa onguyise uthi wavuswa ezintatha efonelwa ngabasebenza nendodana yakhe bemtshela ukuthi ilimele kanzima makaphuthume emsebenzini.
Uthi uma efika emagcekeni ale nkampani bamtshela ukuthi usedlulile emhlabeni. Akakwazanga nokungena ngaphakathi eyozanelisa ngokuthi yindodana yakhe le abakhuluma ngayo.
“Kube nzima uma sesiyolanda isidumbu ukuthi ngimbuke yize elimale emlenzeni kuphela engathintekanga ngenhla. Kodwa akuvumi khona ukuthi ngamukele ukuthi indlalifa yami isidlulile. Bengingeke ngimbuke eyile nto abeyiyo ngoba ngizizwa ngishawa wunembeza ukuthi angikwazanga ukumvikela noma ngibe khona emizuzwini yokugcina yempilo yakhe,” kubeka uMntungwa ehlengezela izinyembezi.
Echaza uthe indodana yakhe ibisanda kuqeda inyanga iqale leli toho yenzela ukungahlali ekhaya njengoba iqede isikole nyakenye.
Uthe bebehlele ukuba angene enyuvesi ngonyaka ozayo enze izifundo zomthetho.
Uthi ulindele umbiko onencazelo ngokufa kwendodana yakhe ophuma kwaRainbow Chicken ngokwenzeka.
“Ukuze ngiduduzeke ngidinga ukuba ngaziswe ngokwenzeka. Nginemibzo eminingi. Wangena kanjani kulo mshini? Abamkhiphanga ngani ngoba wayebhajwe amahora amabili kusukela ngehora lesibili kwaze kwashaya elesine esabhajiwe,” kubuza uMntungwa.